बाँकेमा अनुसन्धानमा कार्यरत जवान प्रविन थापाको ह’त्या, प्रविनकी गर्लफ्रेण्ड समेत शं काको घेरामा, घटनास्थलमा भेटिए यस्ता चिज ! – Wow Sansar
बाँकेमा अनुसन्धानमा कार्यरत जवान प्रविन थापाको ह’त्या, प्रविनकी गर्लफ्रेण्ड समेत शं काको घेरामा, घटनास्थलमा भेटिए यस्ता चिज !
January 16, 2021 176
बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिका कारकादो मेरी गोल्ड स्कुल पछाडिको खेतमा एक युवक ह ‘त्या गरिएको अवस्थामा फेला परेका छ्न । नीज मृ तकलाई ह तिया रले टा ‘उकोमा ‘हा ‘नेर ज्यान लिएको हुनसक्ने प्र हरीको अनुमान गरेको छ । बाँके प्रहरी प्रवक्ता, डिएसपी सुवास खड्काले मृतक राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय बाँकेमा सहायक सूचकको रुपमा कार्यरत प्रविन थापा मगर रहेको जानकारी दिएका छन् ।
घटनापछि प्रहरीले थापामगरकी गलफ्रेण्डलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने भएकोछ । प्रहरी श्रोतका अनुसार थापामगरकी गलफ्रेन्डलाई अनुसन्धानका लागि झिकाइदै छ ।
यस्तै घटनास्थलमा न शा प्रयोग गरिएको हुनसक्ने पाइएको छ । त्यसमा प्रयोग हुने सामाग्ी भेटिएकाले यसको प्रयोग भएको शं का बढेको हो ।
उनलाई अहिले पोष्टमार्टमका लागि भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा लगिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सहायक सुचक प्रविण थापामगरको श व बाँकेको लग्दहवा नजिकै तोरीबारीमा भेटिएको हो ।
उनको श व नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको लग्दहवामा शुक्रबार दिउँसो भेटिएको थियो । उनको शरीरमा ‘डा’महरु देखिएको प्रहरीले बताएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता एवम डिएसपी सुबास खड्काले घटनाको बारेमा अनुसन्धान भैरहेको बताए । उनले भने, ‘अनुसन्धानको विभिन्न पाटोलाई हामीले हेरेर अध्ययन सुरु गरिसकेको छौं । छिटै तथ्य बाहिर आउनेछ ।
ब्यक्तिगत कारण भएको हो वा व्यावसायिक कारणले त्यो कुरामा हामीले अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरेका छौं । अहिले अरु केहि भन्न सकिन्न ।’ शुक्रबार बाँके प्रहरीले घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्न घटनास्थलमा कुकुरको प्रयोग समेत गरेको थियो ।
प्रधानसेनापति ट्रफी खेलकूद प्रतियोगिता, २०७७ सम्पन्न भएको छ । नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गीअड्डामा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले शुक्रबार विशेष समारोहबीच प्रतियोगिताको समापन गर्नुभयो । प्रतियोगितामा फुटबल, भलिबल, बास्केटबल, सुटिङ र एग्लेटिक्स विधामा १५ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । सो प्रतियोगितामा आर्चरीलाई पहिलोपटक प्रदर्शनी खेलको रुपमा समावेश गरिएको थियो ।
समापन समारोहमा प्रधानसेनापति थापाले पृतना तथा बाहिनीतर्फको समग्र खेलकूदमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल क्रमशः १६ नम्बर बाहिनी अड्डा, मध्य पृतना र उत्तर पश्चिम पृतनालाई नगद तथा ट्रफी प्रदान गर्नुभयो । यसैगरी गणतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल क्रमशः जगदल गण, एक नम्बर जगदल गण र चण्डीदल गणलाई समेत उहाँले नगद तथा ट्रफी प्रदान गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रधानसेनापति थापाले ‘अतिरथि स्व निरशम्सेर जबरा पुरस्कार रन फर फन २०७६’ को म्याराथनको विजेता होमलाल श्रेष्ठलाई तथा ‘महारथि गौरवशम्सेर जबरा अजेयबल ट्रफी’ महिलातर्फ तेक्वान्दो खेलाडी नीता गुरुङ र पुरुषतर्फ ब्याडमिन्टन खेलाडी रत्नजित तामाङलाई प्रदान गर्नुभयो ।
बलाधिकृत प्रभुराम शर्माले गण फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल जगदल गणका खेलाडीलाई नगद, ट्रफी तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो । सोही खेलमा द्वितीय भएका नयाँ गोरख गणका खेलाडीलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले तथा तृतीय भएको भैरवप्रसाद गणका खेलाडीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो ।
यस्तै बास्केटबलतर्फ प्रथम हुने मध्यपूर्वी पृतनाका खेलाडीलाई उपरथि निरञ्जनकुमार श्रेष्ठले, भलिबलमा प्रथम हुने उपत्यका पृतनाका खेलाडीलाई उपरथि गोकुल भण्डारीले, सुटिङमा प्रथम हुने १६ नम्बर बाहिनीका खेलाडीलाई उपरथि अनन्त कार्कीले तथा एथलेटिक्सतर्फ प्रथम हुनेलाई १६ नम्बर बाहिनीका खेलाडीलाई उपरथि सरोजप्रताप राणाले नगद, ट्रफी तथा प्रमाणपत्र यसअघि प्रदान गर्नुभएको थियो । समापन कार्यक्रममा पूर्वप्रधानसेनापति, अन्य सुरक्षा अङ्गका उच्च अधिकृत, नेपाली सेनाका बहालवाला तथा पूर्व उच्च अधिकृतको उपस्थिति थियो ।
‘स्वास्थ्यका लागि खेलकूद, राष्ट्रका लागि खेलकूद’ नारासहित प्रधानसेनापति ट्रफी खेलकूद प्रतियोगिता, २०७७ प्रतियोगिता गत पुस २९ गतेदेखि शुरु भएको हो । प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको १५ टोलीको सहभागिता थियो । सेनाले विसं २०६५ देखि प्रधानसेनापति ट्रफी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको हो ।
Prevसौता बनेर आइन्, आफूभन्दा १५ बर्ष कान्छो छोरालाई नै आँखा लगाइन् अहिले भइन् गर्भवती
Nextश्रीमानले विवाह भएको पाँच वर्ष सम्म पनि नछोएपछि ‘सु-साइड’ गरेकी प्रियाको त्यो नोट, जसले संसारलाई रूवायो‘
आमाको लागि यस्तो भाबुक स्टाटस लेखेर पोर्चुगलमा देहत्याग
एका बिहानै बाग्लुङ्ग कालिका मन्दिरकाे दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस भेटी स्वरुप ॐ लेखी एक सेयर गर्नुहोस्, मनकामना पूरा हुने छ